भावुक बने ओली– ‘यो फाउको जिन्दगी हो’ « Loktantrapost
भावुक बने ओली– ‘यो फाउको जिन्दगी हो’
४ मंसिर २०७४, सोमबार १७:०२
काँकरभिट्टा । बाम गठबन्धनले आइतवार काँकरभिट्टामा आयोजना गरेको चुनावी जनसभा प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको निधनका कारण शोकसभा जस्तै बन्यो ।
मुख्य वक्ताका रुपमा आउने भनिएका नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सभामा आउने कुरै भएन । आएका थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली । तर उनी पनि सभामा बोल्दा मात्र होइन, बसुञ्जेल भावुक देखिए ।
भन्सार गेटनेर आयोजना भएको सभामा हजारौँको उपस्थिति भए पनि वक्ताहरुले मन्तब्यको अधिकांश समय प्रचण्डपुत्रको निधनप्रति शोकका शब्द व्यक्त गर्नमै खर्चेका थिए ।
कार्यक्रममा काठमाडौँदेखि कोमल वली लगायतको कलाकार टोली आएको भए पनि त्यहाँ कुनै गानाबजाना सुनाइएन ।
वक्ताको रुपमा मञ्चमा उत्रिएकी गायिका वलीले प्रकाशको निधनले ‘आज कुनै गीत गाउन मन नलागेको’ बताइन् । केपी ओलीले सुनाए फाउको जीवनगाथा ः
अरुबेला उखान र कथा सुनाउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतवार मन्तव्यको सुरुदेखि नै शोकका कुरा सुनाए ।
प्रकाशको निधनले आफु स्तब्ध भएको सुनाउँदै उनले आफ्नो, आफ्नो पार्टी एमाले र जनसमुदायकै तर्फबाट प्रकाशप्रति श्रद्धाञ्जलि र प्रचण्ड लगायत सिङ्गो परिवारमा समवेदना व्यक्त गरे ।
अरुबेला नभन्ने गरेको आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्यको बारेमा नेता ओली काँकरभिट्टा सभामा भावुकतावश निकै खुलेका थिए ।
उनले आफुले अरुले नै दिएको किड्नी राखेर बाँचेको विषयलाई ‘मोटरको ग्यारेजमा लगेर पाटपूर्जा फेरे जस्तै’ भएको बताए ।आफुले अहिले फाउको जिन्दगी बाँचिरहेको बताउँदै उनले बाँकी जीवन नेपाली जनताको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि लगाउने सङ्कल्प सुनाए ।
‘यो फाउको जिन्दगी हो, जनताको सेवामा बिताउँछु’, ओलीले सभामा भने–‘मेरो आफ्ना निम्ति केही गर्नु छैन, भ्रष्टाचार गर्नु छैन मैले, लैजानु पर्ने पनि केही छैन ।’आफ्नो चार पटक पेटमा अपरेसन गरेको पनि उनले सुनाए । ओलीको स्वास्थ्य बारेको यस्तो भाषण सुनेर दर्शक दीर्घा चुपचाप भएको थियो ।
कार्यक्रममा झापा क्षेत्र नं. १ का बाम गठबन्धनका उम्मेद्वार राम कार्की, झापा क्षेत्र नं. ३ का उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रविन कोइराला, गायिका कोमल वली र माओबादी नेता प्रकाश भण्डारीले मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए ।